Usoro MappingGIS: nke kacha mma enwere. - Geofumadas
Jenụwarị, 2014 ArcGIS-ESRI, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis, ọtụtụ
MappingGIS, ma e wezụga inye anyị ihe na-adọrọ mmasị blog, na-etinye uche n'omume azụmahịa ya n'inye ọzụzụ ọzụzụ n'ịntanetị n'isiokwu nke geospatial onodu.
Na 2013 naanị, ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 225 gara agụmakwụkwọ ha, ọnụ ọgụgụ nke m weere dị ka ihe dị mkpa, na-atụle na mbọ ahụ dị na ndị ọchụnta ego abụọ malitere nke a ntakịrị ihe karịrị otu afọ gara aga. Ya mere, anyị ji mmalite nke 2014 akwalite ụzọ gị.
Usoro Eke Eke Eke Eke maka ArcGIS 10.
Mụta otu esi emepụta edemede iji rụọ ọrụ ọrụ GIS na ijikwa ozi gbasara ohere
Site na nke a, ị na-amụta iji asụsụ mmemme Eke Ọgba na-eme ihe n'ụzọ dị ụtọ na nke na-enweghị ike ime. Usoro a na-eji ndị ArcGIS ndị na-eme ihe mgbe niile chọrọ ịgafe nzọụkwụ ọzọ, na-emepụta ọrụ nchịkwa ozi, nchịkọta na nhazi ọwa.
Na nke a, ị ga-amụta, site n'ọzọ ruo nzọụkwụ:
Nabatara asụsụ mmemme Eke Ọgba.
Na-emepe edemede gị iji chekwaa n'ime usoro GIS ndị e mere na mbụ.
Ihe ndekọ, nyocha na ajụjụ banyere ọdịnaya GIS na-eme ngwa ngwa.
Nzọụkwụ site na ịrụ obere ọrụ GIS iji jikwa nnukwu edemede nke ozi.
Management na ọgbọ nke map na map nke map ọbụna na-emeghe ArcGIS.
Usoro ntanetị nke ngwa ngwa weebụ.
Na-arụ ụlọ ọhụụ zuru ụwa ọnụ OpenGeo Suite
Ọ bụ ndị niile chọrọ ịmalite ịmalite ịmepụta ngwa weebụ nke map na ngwanrọ na-emeghe, site na mbubata data ahụ, njikwa ya na mbipụta nke ya site na weebụ na-agbaso ụkpụrụ OGC.
Mepụta data nchekwa data ma gosipụta analysis gbasara spatial na PostGIS.
Jikwaa ma mepụta data gbasara data gbasara GeoServer.
Debe map ma mepụta ụdị si web na GeoExplorer.
Na-ekpuchi oghere nke eserese ngosi na GeoWebCache.
Mepụta ngwa ngwa ibe weebụ na OpenLayers na Akwụkwọ edemede.
Mepụta ma jiri geoJSON faịlụ iji chekwaa ụlọ ahụ ma mee ka ihe niile dị mfe.
Oge GIS Expert oge: ArcGIS, gvSIG na QGIS.
Mụta ịchịkwa atọ kachasị ebe niile ma rịọ ndị ahịa GIS desktọọpụ na ahịa ọrụ n'ụwa niile.
Nke a bụ ihe zuru ezu N'ezie na nke ị na-amụta na-arụ ọrụ na GIS raster na vector, projections, topology iwu, edezi, eke symbology na labeling, mejupụtara map maka ebipụta na online akwụkwọ, geoprocessing ngwá ọrụ na Model Nrụpụta ArcGIS, gvSIG sextant na QGIS ma ọ bụ ahịhịa, wdg
Mara interface nke ArcGIS, gvSIG na QGIS.
Na-arụ ọrụ na ngwugwu na ọrụ.
Dezie data gbasara ohere.
Na-arụ ọrụ na usoro nhazi na ihe oyiyi eserese.
Mepụta nsụgharị na ịkọ aha.
Mepụta ihe odide map.
Mepụta geodatabases na topology.
Mee nyocha nyocha.
Na-arụ ọrụ na SEXTANTE.
Kwusaa map n'Ịntanet.
Nhazi data Spatial Online: PostGIS.
Na-amalite ịchịkwa nchekwa data nchekwa data na OpenGIS.
Na nke a ị jupụtara mkpa dị ka: Olee otú ị ga-esi bubata ụdịfiles na nchekwa data ahụ? Kedu esi agba ọsọ ọsọ ọsọ mgbe ị na-aza ajụjụ? Kedu ka esi eme nnyocha gbasara mbara igwe? Kedu ihe mere ụdị ụdị geometry na ọdịdị ọdịdị ala? Kedu esi achọpụta data nke dị na PostGIS?
Na mgbakwunye, ị ga-amụta n'ụzọ dị irè, nzọụkwụ site na nzọụkwụ:
Esi tinye PostgreSQL + PostGIS
Otu esi emepụta nchekwa data ma nye ya ikike ohere
Otu esi arụ ọrụ data gbasara ohere
Esi lee anya ma nweta data echekwara na PostGIS
Kedu ụdị geometry dị
Kedu ka m si eme nchọpụta spatial na ihe ọrụ dị ichiiche
Otu esi eme ngwa ngwa
Otu esi arụ ọrụ na data raster
Otu esi arụ ọrụ na OpenStreetMap data
Usoro ArcGIS online.
Mụta otu esi ejikwa jupụta ebe niile ma rịọrọ onye ahịa GIS desktọọpụ n'ahịa ahịa n'ụwa niile.
Nke a bụ ihe zuru ezu N'ezie na nke ị na-amụta na-arụ ọrụ na GIS raster na vector, edezi, symbology na labeling, projections, georeferencing, geoprocessing, eke geodatabases na topology, mejupụtara map bipụtawa na-ebipụta web ekiri na ArcGIS online.
Na nke a ị na-amụta, site na nkwụsị ụkwụ:
Esi edezi data ala
Otu esi arụ ọrụ na tebụl
Otu esi arụ ọrụ na usoro nhazi
Esi ese onyinyo raster
Otu esi agba ArcToolbox ngwaọrụ
Otu esi eme nyocha na Modelbuilder
Otu esi emepụta njikọta na ịkọ aha
Otu esi eme nyocha nke raster na onye nyocha nke Spatial
Esi emepụta geodatabases
Kedu esi emepụta ụkpụrụ iwu
Otu esi ebipụta map n'Ịntanet na ArcGIS n'Ịntanet
Oge QGIS nke oge.
Mụta otu esi ejikwa ihe kachasị ike ma chọọ ka ngwaọrụ GIS desktọọpụ ghere oghe na ọrụ ọrụ n'ụwa niile.
Ọ bụ usoro zuru oke nke ị ga-amụta ịrụ ọrụ na ozi ntanetị na ntaneti, nkọwa, edezi, akara na ịkọ aha, mejupụtara map maka ibipụta akwụkwọ, geoprocessing, GRASS, online publication, etc.
Kedu ihe bụ GIS?
QGIS interface. Ntuziaka maka ịhazi usoro.
Symbology na labeling.
Ọgbọ nke ozi na edezi tebụl.
Mmekọrịta nke GRASS na QGIS.
Ọgbọ nke map maka mbipụta na n'ịntanetị.
Mmekọrịta na ọdụ data gbasara spatial: PostGIS.
Usoro ọmụmụ a na-arụ ọrụ na klaasị Virtual, ka enwere ike iwere ha n'oge ọ bụla yana ịnweta oge elekere 24. Anyị na-ahụta ya ihe na-atọ ụtọ etu ha si erite uru na blọgụ na listi nzipu ozi ha dị ka ihe ngosi maka ogo nke ihe ọmụmụ ha.
Gaa na nkuzi MappingGIS
Previous Post«Previous Olee otú ụwa map na 1922
Next Post BlogPad - WordPress Editor maka iPadNext »
2 Na-aza "Usoro MappingGIS: nke kacha mma enwere."
Mario kwuru, sị:
April, 2015 na
Aga m agwa gị laddie
Aurelio kwuru, sị:
Ọ bụ ihe nsọpụrụ na ị deewo ihe dị otú ahụ zuru ezu na usoro ọmụmụ anyị. Anyị nwere ekele dị ukwuu. BỤGHỊ Ị BỤ ỤLỌ!